My ịda ogbenye ga-aba na-akwụsị m nkwado nke ndị ọzọ: DualDonate — HunterThinks.com
N'agbanyeghị na m na ịda ogbenye, M ga-alaghachi na-akwado nke ọma anyị na ụwa, ma m ga-eji ụzọ dị iche iche m na-eji na n'oge gara aga. M na-akpọ ya DualDonate.
taa, M egwu ogbenye, na m na-ewute m na-apụghị inye ego iji na-akwado ezi ihe anyị na ụwa. M na-edebe ihe n'ịgba ndepụta nke ihe ndị nke m ga-inye mgbe m na-ogbenye. Afọ gara aga, ọ bụghị m ogbenye, na m na-akwado ndị mmadụ site na m ọrụ, na ihe ọmụma m, na nkà m, and with my money.
M agha megide m ogbenye ruo ogologo oge, na m ike iji na-akwado ndị ọzọ ndị nwayọọ nwayọọ jụrụ. My ndepụta ihe m chọrọ iji na-akwado na-eto ibu. Ma n'ihi m ịda ogbenye, M ga-egbu oge na-akwado ha na ụzọ m na mbụ na-akwado ha.
M ga-echere iji m na mbụ ụzọ nke nkwado, ma na-akwado ha site na ụfọdụ usoro, agakwaghị m na-eche.
M ga-ike mkpọsa inye ego na ọtụtụ ihe m chọrọ iji na-akwado. M ga na-akwado ihe ndị ruuru mmadụ, art, anụmanụ ikike, technology, ihe ọmụma, na ndị ọzọ. Size abụghị mkpa. Location abụghị mkpa. Na nke ọ bụla mkpọsa, ọkara ego ga na-akwado m ụzọ mgbapụ si ịda ogbenye na ọkara nke ego ga-aga ndị m chọrọ iji na-akwado. Ruo mgbe onye na-eche nke a mma aha, M na-akpọku a DualDonate.
Otu Mata echiche, Ndụ m Tags DualDonate, Poverty, Ihe ọ bụla banyere ha post igodo
Zọpụta cat ndụ: DualDonate na ọṅụ zuru okè Cat nsọ